“Ho ren’ny sofinao ny teny avy ao aorianao hoe: ‘Ity no lalana.’ ”—ISAIA 30:21.
Inona no ataon’i Satana mba hahatonga antsika tsy handre ny feon’i Jehovah?
Inona ireo toetra roa mety hisakana antsika tsy handre ny feon’i Jehovah?
Inona no tsy maintsy hataontsika raha te hahazo ny tari-dalan’i Jehovah isika?
1, 2. Ahoana no ampitan’i Jehovah ny tari-dalany?
HITA ao amin’ny Baiboly fa nanome tari-dalana ny vahoakany foana i Jehovah. Nisy fomba maromaro nanaovany an’izany. Nampahafantariny tamin’ny alalan’ny anjely na nofy na fahitana, ohatra, izay hitranga na izay asa ampanaoviny ny mpanompony. (Nom. 7:89; Ezek. 1:1; Dan. 2:19) Nampiasa olona teo anivon’ny fandaminany koa i Jehovah mba hisolo tena azy ka hanome toromarika. Nahazo fitahiana foana izay nankatò ny tari-dalan’i Jehovah, na ahoana na ahoana fomba nanomezany an’izany.
2 Ny Baiboly sy ny fanahy masina ary ny fiangonana kosa ankehitriny no ampiasain’i Jehovah mba hanomezana tari-dalana. (Asa. 9:31; 15:28; 2 Tim. 3:16, 17) Mazava tsara ny tari-dalany ka toy ny hoe ny sofintsika mihitsy no mahare azy miteny avy ao aoriana hoe: “Ity no lalana ka andehano.” (Isaia 30:21) Manampy antsika handre ny feon’i Jehovah koa i Jesosy, satria izy no mitarika ny fiangonana amin’ny alalan’ny “mpanompo mendri-pitokisana sy malina.” (Mat. 24:45) Tokony hankatò tsara an’ireny tari-dalana sy toromarika ireny isika, satria izany no hahazoantsika ny fiainana mandrakizay.—Heb. 5:9.
3. Inona no mety hahatonga antsika tsy hankatò an’i Jehovah? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
3 Ataon’i Satana izay tsy hihainoantsika ny tari-dalan’i Jehovah, satria fantany fa ho voavonjy isika raha manao izany. “Mamitaka” koa “ny fo” ka mety ho tsy te hankatò tanteraka an’i Jehovah isika. (Jer. 17:9) Hodinihintsika àry hoe inona no azo atao mba ho resintsika ireo olana ireo, ka hihaino an’i Jehovah foana isika. Ho hitantsika koa fa mila miresaka amin’i Jehovah sy mihaino azy isika, raha te hifandray tsara aminy foana na inona na inona mitranga.
AZA MANAIKY HO VOAFITAK’I SATANA
4. Inona no ataon’i Satana mba hanimbana ny toe-tsain’ny olona?
4 Manely lainga sy hevi-diso i Satana mba hanimbana ny toe-tsain’ny olona. (Vakio ny 1 Jaona 5:19.) Tsy ny gazety sy ny boky ihany izao no manaparitaka hevitra manerana ny tany, fa eo koa ny radio sy ny televiziona ary ny Internet. Marina fa milaza zavatra mahaliana izy ireny, nefa matetika no mampirisika ny olona hanao zavatra mifanohitra amin’ny fitsipik’i Jehovah. (Jer. 2:13) Hita amin’ny vaovao sy fialam-boly maro, ohatra, fa azo ekena ny fanambadian’ny samy lehilahy na samy vehivavy. Maro àry no lasa mihevitra fa hentitra loatra ny zavatra lazain’ny Baiboly momba izany.—1 Kor. 6:9, 10.
5. Inona no tokony hataontsika mba tsy ho voasariky ny fampielezan-kevitr’i Satana isika?
5 Inona no hanampy an’ireo tia ny fitsipik’i Jehovah mba tsy ho voasariky ny fampielezan-kevitr’i Satana? Ahoana no hahaizan’izy ireo manavaka ny tsara sy ny ratsy? Mila mitandrina ny tenin’Andriamanitra izy ireo. (Sal. 119:9) Misy tari-dalana ahafahana manavaka ny marina sy ny diso ao amin’ny Tenin’Andriamanitra. (Ohab. 23:23) Namerina teny avy ao amin’ny Soratra Masina i Jesosy, ka nilaza fa ilaintsika “ny teny rehetra avy amin’ny vavan’i Jehovah.” (Mat. 4:4) Ilaintsika ny mianatra hoe ahoana no hampiharana ny toro lalan’ny Baiboly eo amin’ny fiainantsika. Fantatr’i Josefa, ohatra, fa fahotana ny mijangajanga, na dia mbola ela be tatỳ aoriana aza vao nosoratan’i Mosesy ny lalàn’i Jehovah mandrara an’izany. Tsy tao an-tsainy mihitsy ny tsy hankatò an’i Jehovah rehefa nitaona azy hanao firaisana ny vadin’i Potifara. (Vakio ny Genesisy 39:7-9.) Tsy navelan’i Josefa hisakana azy tsy hihaino ny feon’i Jehovah ny feon’ny vadin’i Potifara, na dia efa ela aza io vehivavy io no nitaona azy. Mila mihaino ny feon’i Jehovah isika raha te hahay hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Ilaintsika koa ny manampin-tsofina amin’ny fampielezan-kevitr’i Satana izay mitabataba tsy misy farany.
6, 7. Inona no tokony hataontsika mba tsy ho voafitak’i Satana?
6 Misy fampianarana ara-pivavahana maro mifanohitra eto amin’ity tontolo ity. Maro àry no mieritreritra fa tsy ho hitany mihitsy ny fivavahana marina. Omen’i Jehovah tari-dalana mazava tsara anefa ny olona vonona hanaraka ny tari-dalany. Mila manapa-kevitra isika hoe iza no hohenointsika. Tsy afaka mihaino feo roa amin’ny fotoana iray isika, ka mila fantarintsika ny feon’i Jesosy ary mihaino azy isika. Izy no notendren’i Jehovah hiandry ny ondriny.—Vakio ny Jaona 10:3-5.
7 Hoy i Jesosy: “Tandremo izay renareo.” (Mar. 4:24) Ahoana no itandremantsika na ihainoantsika ny torohevitr’i Jehovah, izay mazava sady mahasoa? Ilaina ny manomana ny fo mba handray an’ilay izy. Mety hanongilan-tsofina amin’ny torohevitra ratsin’i Satana isika raha tsy mitandrina, ka tsy hiraharaha ny torohevitra feno fitiavana omen’i Jehovah. Aza avela hifehy ny fiainanao mihitsy àry ny hira, filma, fandaharana amin’ny tele, boky, mpiara-miasa, mpanabe, na ireo lazaina fa manam-pahaizana eto amin’ity tontolo ity.—Kol. 2:8.
8. a) Nahoana ny fontsika no mety hahatonga antsika ho mora voafitak’i Satana? b) Inona no mety hitranga raha tsy miraharaha ireo famantarana mampitandrina antsika isika?
8 Fantatr’i Satana fa mora manota isika ka hararaotiny. Tena sarotra ny tsy mivadika rehefa manararaotra ny fahalementsika izy mba hitarihana antsika hanota. (Jaona 8:44-47) Inona àry no hanampy antsika tsy ho voataonany? Eritrereto ny olona iray tsy mieritreritra afa-tsy izay mahafinaritra azy eo no ho eo, ka lasa manao zavatra ratsy tsy noeritreretiny hatao mihitsy. (Rom. 7:15) Inona no mety ho nahatonga izany? Efa nanomboka tsy nihaino tsara ny feon’i Jehovah angamba izy. Mety ho efa nisy famantarana ihany hoe manomboka simba ny fony, nefa tsy tsikariny ilay izy na tsy noraharahainy. Angamba tsy nivavaka intsony izy, na lasa tsy nazoto nanompo, na nanomboka tsy nivory. Resin’ny faniriany izy tamin’ny farany ka nanao zavatra efa fantany fa ratsy. Tsy hanao fahadisoana lehibe toy izany isika raha mailo sy manitsy izay tsy mety avy hatrany, raha vao mahita famantarana mampitandrina antsika. Tsy hihaino ny feon’ny mpivadi-pinoana mihitsy koa isika raha mihaino ny feon’i Jehovah foana.—Ohab. 11:9.
9. Nahoana no tena ilaina ny mamantatra mialoha ny fahalementsika?
9 Mety ho voavonjy ny marary iray raha vao manomboka ny aretiny dia hita. Toy izany koa fa ho afaka hisoroka loza isika, raha tonga dia fantarintsika ny fahalemena mety hahatonga antsika ho resin’ny fakam-panahy. Hendry isika raha manao zavatra avy hatrany, dieny mbola tsy ataon’i Satana “sambo-belona hanaraka ny sitrapony.” (2 Tim. 2:26) Inona no tokony hataontsika raha tsapantsika fa lasa tsy mifanaraka amin’izay takin’i Jehovah ny toe-tsaintsika sy ny faniriantsika? Mila manetry tena isika, ka miverina aminy tsy misy hataka andro. (Isaia 44:22) Mila manongilan-tsofina hihaino ny toroheviny koa isika ary mankatò an’izany amin’ny fo manontolo. Tokony hanaiky isika fa mety hamela takaitra eo amintsika ny fanapahan-kevitra ratsy raisintsika, ka mety hizaka vokany mangidy isika na dia efa miverina amin’i Jehovah aza. Aleo tokoa misoroka toy izay mitsabo!
Nahoana ianao no tsy ho voafitak’i Satana raha manana fahazarana tsara? (Fehintsoratra 4-9)
AZA MIREHAREHA NA MITSIRIRITRA
10, 11. a) Ahoana no ahalalana ny olona mirehareha? b) Inona no lesona raisintsika avy amin’ny fikomian’i Kora sy Datana ary Abirama?
10 Mila manaiky isika fa mety hitarika antsika hiala amin’i Jehovah ny fontsika. Mahery mantsy ny fanirian-dratsy. Mety hirehareha na hitsiriritra, ohatra, isika. Samy mety hahatonga antsika tsy hihaino ny feon’i Jehovah ireo toetra roa ireo ka hitarika antsika hanao fahadisoana lehibe. Mihevi-tena ho ambony ny olona mirehareha. Mieritreritra izy fa afaka manao izay tiany ka tsy misy afaka miteny aminy izay tokony hataony. Heveriny àry fa tsy ilaina ny torohevitry ny mpiara-manompo, na ny anti-panahy, ary na ny an’ny fandaminana aza. Lasa toy ny hoe zara raha henony ny feon’i Jehovah.
11 Nikomy tamin’ny fahefan’i Mosesy sy Arona i Kora sy Datana ary Abirama, fony tany an-tany efitra ny Israelita. Nirehareha ry Kora sy ny namany ka te hanompo an’i Jehovah araka izay saim-pantany fotsiny. Inona no nataon’i Jehovah? Novonoiny ireo mpikomy ireo. (Nom. 26:8-10) Tena lesona lehibe ho antsika izany! Loza no vokany rehefa mikomy amin’i Jehovah. Tadidio foana fa “ny fireharehana mialoha ny fahalavoana.”—Ohab. 16:18; Isaia 13:11.
12, 13. a) Milazà ohatra mampiseho fa mampidi-doza ny fitsiriritana. b) Nahoana isika no afaka milaza fa mitombo haingana ny fitsiriritana raha tsy fehezina?
12 Eritrereto koa ny fitsiriritana. Matetika ny olona mitsiriritra no lasa sahisahy manao zavatra tsy ananany zo, ary mety handika ny fitsipik’i Jehovah. Nanome fanomezana an’i Elisa mpaminany i Namàna, filohan’ny tafika syrianina, rehefa avy nositranin’i Elisa ny habokany. Tsy nandray an’izany anefa i Elisa. Nitsiriritra an’ireo fanomezana i Gehazy mpanompony, ka nieritreritra hoe: “Raha mbola velona koa i Jehovah, dia hihazakazaka hanenjika [an’i Namàna] aho ka haka zavatra avy aminy.” Tsy niteniteny tamin’i Elisa izy fa tonga dia nanenjika an’i Namàna ary nandainga an-kitsirano, ka nangataka “talenta volafotsy iray sy akanjo indroa miova.” Inona no vokatr’izany? Nifindra taminy ny habokan’i Namàna!—2 Mpanj. 5:20-27.
13 Mety hitsiriritra kely fotsiny ny olona iray amin’ny voalohany. Vetivety anefa dia mety hahery be ny faniriany raha tsy feheziny, ka mety hanaonao foana izy. Diniho ny tantaran’i Akana. Nitombo haingana be ny faniriany. Hoy izy: “Nahita akanjom-boninahitra teo amin’ny zavatra azo babo aho, eny, akanjo tsara tarehy avy any Sinara, ary koa sekely volafotsy roanjato sy vaingam-bolamena iray nilanja sekely dimampolo. Dia notsiriritiko izany ka nalaiko.” Tsy nanohitra an’ilay fanirian-dratsiny i Akana, fa nangalatra an’ireo akanjo sy vola ka nanafina izany tao amin’ny tranolainy. Tratra izy ka nilazan’i Josoa hoe hahatonga loza aminy i Jehovah. Notoraham-bato ho faty izy sy ny fianakaviany tamin’iny andro iny. (Jos. 7:11, 21, 24, 25) Tsy misy vita fanefitra amin’ny fitsiriritana. Ilaina àry ny ‘mitandrina amin’izay rehetra mety ho fitsiriritana.’ (Lioka 12:15) Inona no azo atao raha sendra manana fanirian-dratsy isika na mieritreritra zavatra vetaveta? Ilaina ny mifehy ny saina, ka tsy hamela azy io hahatonga antsika hanota.—Vakio ny Jakoba 1:14, 15.
14. Inona no tokony hataontsika raha tsapantsika fa mirehareha isika na mitsiriritra?
14 Samy mety hitondra loza ny fireharehana sy ny fitsiriritana. Mety hahatonga antsika hanao ratsy mantsy ny toe-tsaina toy ireo. Raha saintsainintsika anefa ny vokatry ny ratsy ataontsika, dia hihaino ny feon’i Jehovah foana isika. (Deot. 32:29) Manoro antsika izay tokony hatao i Jehovah ao amin’ny Baiboly. Lazainy ao koa ny soa ho azon’izay manaraka ny tari-dalany, sy ny vokany raha manao zavatra tsy mety isika. Ahoana àry raha alaim-panahy hanao ratsy isika, satria lasa mirehareha na mitsiriritra? Mila mieritreritra isika hoe inona no ho vokatr’izany eo amintsika sy ny mpianakavintsika, ary eo amin’ny fifandraisantsika amin’i Jehovah.
15. Inona no lesona raisintsika avy amin’i Jesosy?
15 Tian’i Jehovah ho sambatra isika. (Sal. 1:1-3) Omeny tari-dalana ampy tsara sy amin’ny fotoana ilantsika azy isika. (Vakio ny Hebreo 4:16.) I Jesosy aza lavorary, nefa nila nifandray tamin’i Jehovah foana ka nivavaka tsy tapaka. Nanohana sy nanome tari-dalana azy tamin’ny fomba miavaka i Jehovah. Nandefa anjely hikarakara azy izy, nanome ny fanahiny masina mba hanampiana azy, ary nanampy azy hifidy an’ireo apostoly 12. Re avy any an-danitra koa ny feon’i Jehovah nilaza fa nanohana sy nankasitraka an’i Jesosy izy. (Mat. 3:17; 17:5; Mar. 1:12, 13; Lioka 6:12, 13; Jaona 12:28) Tokony hamboraka ny ao am-pontsika amin’ny vavaka isika, toy ny nataon’i Jesosy. (Sal. 62:7, 8; Heb. 5:7) Hifandray akaiky amin’i Jehovah isika raha mivavaka, ary hanao zavatra manome voninahitra azy.
16. Inona no azontsika atao raha tiantsika ny hampian’i Jehovah mba handre ny feony?
16 Tsy sarotra ny mahita ny torohevitr’i Jehovah, nefa tsy tereny hanaraka izany isika. Hahazo ny fanahiny masina isika raha mangataka aminy. (Vakio ny Lioka 11:10-13.) Tena mila ‘mitandrina ny fomba fihainoantsika’ anefa isika. (Lioka 8:18) Mihatsaravelatsihy, ohatra, isika raha mangataka fanampiana amin’i Jehovah mba tsy haloto fitondran-tena nefa mbola mijery boky na filma vetaveta. Tokony ho any amin’izay toerana misy ny fanahin’i Jehovah isika, ohatra hoe any am-pivoriana. Maro ny mpanompon’i Jehovah nisoroka loza satria nihaino ny feon’i Jehovah, tany am-pivoriana. Hitan’izy ireo tamin’izany hoe nisy fanirian-dratsy nitsiry tao am-pony, ary nanitsy izay tsy nety izy ireo.—Sal. 73:12-17; 143:10.
HENOY TSARA FOANA NY FEON’I JEHOVAH
17. Inona no maha ratsy ny matoky tena?
17 Diniho izay nitranga tamin’i Davida mpanjakan’ny Israely. Naharesy an’i Goliata, ilay Filistinina goavam-be, izy tamin’ny mbola tanora. Lasa miaramila izy, ary lasa mpanjaka tatỳ aoriana ka niaro ny fireneny sy nandray fanapahan-kevitra ho azy io. Lasa natoky tena anefa i Davida ka voafitaky ny fony. Nanao fahotana lehibe izy sy Batseba ary mbola nampamono an’i Oria vadin’i Batseba koa izy. Nanetry tena anefa izy rehefa nahitsy ary niaiky ny fahadisoany, ka nifandray tsara tamin’i Jehovah indray.—Sal. 51:4, 6, 10, 11.
18. Inona no hanampy antsika hihaino foana ny feon’i Jehovah?
18 Aoka isika hanaraka ny torohevitra ao amin’ny 1 Korintianina 10:12 fa tsy hatoky tena loatra. Tsy afaka ‘mitondra samirery ny fiainantsika’ isika fa mila mpitarika. Tsy maintsy misafidy àry isika na hihaino ny feon’i Jehovah na hihaino ny feon’ilay Fahavalony. (Jer. 10:23) Enga anie isika tsy hitsahatra hivavaka sy hanaraka foana ny fitarihan’ny fanahy masina, ka hihaino tsara hatrany ny feon’i Jehovah.